सोचेअनुसार प्रदर्शन भएन - Women's Football
सोचेअनुसार प्रदर्शन भएन
काठमाडौँ — लगातार दोस्रो खेलमा पराजित भएपछि नेपाली महिला फुटबल टोली अर्को वर्ष जापानमा हुने ग्रिष्मकालीन ओलम्पिक छनोटको दोस्रो चरणबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ । पहिलो खेलमा घरेलु टोली म्यानमारसँग पराजित भएको नेपालले शनिवार चीर प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग ३–१ गोलले निराश बन्यो ।
म्यानमारको मण्डलार्थिरी रंगशालामा शनिवार दिउँसो सम्पन्न खेलमा दोस्रो हाफको तालमेल नमिल्दा नेपालले भारतसँग दुई साताको अन्तरमा दोस्रो पराजय ब्यहोर्‍यो । यसअघि चैत ८ गते महिला साफ च्याम्पियनसिप फाइनलमा भारतले नेपाललाई ३–१ गोलले नै हराएर लगातार पाँचौँपल्ट उपाधि जितेको थियो ।
पहिलो खेलमा इन्डोनेसियालाई २–० गोलले हराएको भारत भने लगातार दोस्रो जितका साथ ओलम्पिक छनोटको तेस्रो चरणनजिक पुगेको छ । २ खेलबाट ६ अङ्क जोडेको भारत समूह ‘ए’को शीर्ष स्थानमा छ । अन्तिम खेलमा घरेलु टोली म्यानमारबिरुद्धको खेलले भारतको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
पहिलो चरणमा पनि नेपालले भारत र म्यानमारसँगै प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । त्यसपल्ट दुवै खेल नेपालले बराबरीमा रोकेको थियो र समूहको उत्कृष्ट तेस्रो बनेर दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको थियो । समान प्रतिद्वन्दीबिरुद्ध नेपालले दोस्रो चरणमा भने अपेक्षाअनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेन ।
नेपाली टोलीका प्रशिक्षक हरि खडाले पनि समग्रमा ओलम्पिक छनोट नेपाली खेलाडीका लागि म्याच एक्स्पोजर हासिल गर्ने अवसर बनेको बताए । ‘पहिलो चरणमा चेलीहरूको प्रदर्शन बहादुरीपूर्ण थियो, दोस्रो चरणमा समान प्रतिस्पर्धी भएर पनि अपेक्षाकृत प्रदर्शन हुन सकेन,’ करिब ९ महिनादेखि महिला टोलीको प्रशिक्षण सम्हालिरहेका खडाले थपे, ‘नतिजालाई मात्र आधार नमान्ने हो भने टिमको समग्र प्रदर्शनमा सुधार आएको छ, यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ, खेल अनुभव लिँदै, सुधार गर्दै जानुपर्छ । महिला फुटबलको भविष्य राम्रो छ ।’
भारत विरुद्ध पहिलो हाफ १–१ गोलको बराबरीमा सकिएको थियो । भारतले उपहार गोलमार्फत अग्रता बनाएको हो । छैटौँ मिनेटमा बल क्लियर गर्ने क्रममा नेपाली सेन्टर ब्याक पुनम जर्घामगरले आफ्नै पोष्टमा गोल गर्न पुगेकी थिइन् । त्यसको एक मिनेटपछि नै नेपाली कप्तान निरु थापाले बराबरी गोल फर्काएर नेपालको आशा जगाएकी थिइन् ।
प्रशिक्षक खडाका अनुसार रक्षात्मक रणनीति लिएको नेपालको खेल दोस्रो हाफमा खस्कियो । ‘खेलाडीहरूलाई मैले बुझाउन सकिनँ कि उनीहरूले बुझेनन्, दोस्रो हाफमा हाम्रा खेलाडीले सोचेजस्तो खेल्न सकेनन्, मुख्य गरी डिफेन्स सङ्गठित हुने सकेन र हारको कारण नै त्यही बन्यो,’ उनले भने ।
दोस्रो हाफमा दुवै गोल सेटपिसबाट सम्भव भएका थिए । खेलको ६० औँ मिनेटमा पाएको कर्नरलाई सदुपयोग गरी सन्ध्या रंगनाथनले भारतलाई २–१ को अग्रता दिलाइन् । खेल सकिनु ११ मिनेटअघि भारतले पेनाल्टीको अवसर पायो । जहाँ कप्तान आशालता देवीले सहजै गोल गरिन् ।
गएको नोभेम्बरयता नेपाली राष्ट्रिय टोलीले ५ महिनाको अन्तरमा चौथो प्रतियोगिता खेलेको छ ।
लगातारको प्रतियोगिता र खेलले खेलाडी थाकेको पो हो कि ? खडाले त्यसलाई भने सिधै अस्वीकार गरे । नेपालले नोभेम्बरमा ओलम्पिक छनोट–पहिलो चरण, फेब्रुअरीमा हिरो गोल्डकप, मार्चमा साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाएको थियो । चारै प्रतियोगितामा नेपालले भारतबिरुद्ध खेलेको थियो । जहाँ २ खेल हार्दा १ खेलमा जित (हिरो गोल्डकप) र १ बराबरी खेलेको थियो ।
समग्रमा भारतबिरुद्ध नेपालको यो नवौँ पराजय हो । सन् २०१० को दक्षिण एसियाली खेलकुदयता नेपाल र भारत १२ पल्ट आमने सामुन्ने भएका छन् । जहाँ नेपालले ९ हार, २ बराबरी र १ जितको नतिजा आत्मसाथ गरेको छ ।
प्राविधिक रूपमा नेपाल ओलम्पिक छनोट प्रक्रियाबाट बाहिरिइसकेको छ । तर, चार टोली सम्मिलित समूहको तेस्रो तथा अन्तिम खेल नेपालले इन्डोनेसियासँग मङ्गलवार खेल्नेछ । प्रशिक्षक खडाले इण्डोनेसियाबिरुद्ध प्रतिष्ठाका लाग जितको रणनीतिसाथ खेल्ने बताए ।
ओलम्पिक छनोटको दोस्रो चरणमा रहेका १२ टिमलाई ३ समूहमा विभाजन गरिएको छ । तीनै समूहका विजेताले सिधै तेस्रो चरणको छनोटमा प्रवेश पाएका अन्य पाँच टिमसँग खेल्नेछन् । ८ टिमबीच दुई समूह बनाएर तेस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ र हरेक समूहका दुई टिम छनोटको अन्तिम चरणमा पुग्नेछन् । तेस्रो चरणका विजेता र उपविजेताबीच होम एण्ड अवेका आधारमा हुने खेलका दुई विजेताले ओलम्पिक २०२० खेल्न पाउनेछन् ।
नेपाल विरुद्ध भारत
नेपाल ०–५ भारत (२०१०, साग खेलकुद)
नेपाल १–३ भारत (२०१०, साग खेलकुद)
नेपाल ०–१ भारत (२०१०, साफ)
नेपाल १–३ भारत (२०१२, साफ)
नेपाल ०–६ भारत (२०१४, साफ)
नेपाल ०–० भारत (२०१६, साग खेलकुद)
नेपाल ०–४ भारत (२०१६ साग खेलकुद)
नेपाल १–३ भारत (२०१६, साफ)
नेपाल १–१ भारत (२०१८, ओलम्पिक छनोट)
नेपाल २–१ भारत (२०१९, हिरो गोल्ड कप)
नेपाल १–३ भारत (२०१९, साफ)
नेपाल १–३ भारत (२०१९, ओलम्पिक छनोट)
रंगभेदको अन्त्य कहिले ?
एन्फा छनोटमा २३ सय सहभागी